Tag: digniinta warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: digniinta warbaahinta bulshada
Axad, Disembar 13, 2020 Khamiista, Diseembar 24, 2020 Douglas Karr
In kasta oo inta badan tiknoolajiyada suuqgeynta loogu talagalay kormeerka sumcadda iyo falanqaynta dareenka ay si gaar ah diiradda u saaraan warbaahinta bulshada, Calaamadeynta ayaa ah il dhammaystiran oo lagula soconayo wixii ama dhammaan tixraacyada astaantaada internetka. Hanti kasta oo dijitaal ah oo ku xiran bartaada ama ku xusan magacaaga, sheygaaga, hashtag, ama magaca shaqaalaha… waa la ilaaliyaa oo lala socdaa. Iyo barnaamijka 'Brandmentions' wuxuu bixiyaa digniino, dabagal, iyo falanqeyn xagga dareenka ah. Calaamadaha ayaa u suurta galiya ganacsiyada inay: Dhisaan Xiriirro Hawl - Ogaada oo la falgala
Jimco, Febraayo 13, 2015 Tuesday, May 12, 2015 Douglas Karr
Waa wax weyn in la arko horumarka sii socda ee baraha bulshada ee hoos u dhaca qiimaha oo ay heli karaan milkiilaha ganacsiga celcelis ahaan. Socialdraft wuxuu ka bilaabmaa kaliya $ 29 bishii bil kasta astaamaha boqolaal ama kumanaan doolar kaliya dhowr sano ka hor. Mashruucooda kooxeed waa $ 59 bishii isla markaana akoonkooda ganacsi waa $ 99. Xisaabaadka oo dhami waxay la yimaadaan taageero iyo tan muuqaalo ah. Iyadoo la adeegsanayo barnaamijka 'Socialdraft', shirkadaha waxay awoodaan inay kormeeraan dib u eegista
Sabtida, Janaayo 24, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Geofeedia waa barxad rukhsad gaar ah oo suuqleydu ay uga faa'iideysan karaan kormeerka iyo falanqaynta warbaahinta bulshada ee goobta ku saleysan. Tani waxay noqon kartaa istiraatiijiyad suuqgeyn aad u faa'iido badan u leh maareynta sumcadda, ama istiraatiijiyad raadin firfircoon. Waxaa laga yaabaa inaad tahay adeeg bixiye ama aad leedahay wakiillo adeegyo badan oo ku sugan dhulal cayiman - waad la socon kartaa dhammaan taraafikada warbaahinta bulshada si aad u sheegto ama macaamiisha mustaqbalka ee raadinaya caawimaad. Astaamaha Key Geofeedia iyo Kormeeraha Faa'iidooyinka - Isu soo uruur oo keydso warbaahinta bulshada
TrendSpottr: U Bedela Sawaxanka Bulsho ee Calaamadaha Hore ee Waxqabadka
Talaado, Janaayo 13, 2015 Douglas Karr
Ka hor caannimada warbaahinta bulshada, waxaa jiray shirkad daryeel caws oo duubtay dhammaanba wicitaanada macaamiisheeda iyada oo lagu qeexay mowduuc. Nidaamku wuxuu isu beddelay mashiin iib ah sababta oo ah waxay aqoonsan karaan, juquraafi ahaan, arrimaha ka soo goynaya gobolka ka dibna u diraya emayl aad diirada u saarey kuna saleysan mowduucyada soo socda. Dadka jecel daryeelka cawska ayaa arki doona feejignaanta ka dibna waxay u iibsan doonaan xalka ku habboon dukaanka - mararka qaarkood a